Khangela iiDegree zethu kunye neeNkqubo »iYunivesithi yaseHodges
Ukufumana iNkqubo yesiDanga esifanelekileyo kulula.
Impilo yengqondo yonyango
Itekhnoloji yoLwazi lweKhompyutha
Uqeqesho lweSuphavayiza yokuQala
UkuGcina iKhredithi ngobuhlobo
Awufumani oko ukufunayo? Masincede. Shaya nje elinye lamaqhosha angezantsi kwaye uskrolele ezantsi ukubona uluhlu lweenkqubo ezikhoyo.
bonke Accounting Nxu lumene uhambo ngomoya Isikolo se-AWS Bachelor ishishini Impilo yengqondo yonyango Communications Itekhnoloji yoLwazi lweKhompyutha Ubunzululwazi bekhompyutha Ulwaphulo-mthetho Uncedo lwamazinyo Digital Design EMS IsiNgesi njengoLwimi lwesiBini Igrama yesiNgesi Ulwimi lesingesi Okufumaneka ezezimali Uqeqesho lweSuphavayiza yokuQala Izatifikethi zesidanga impilo Ukhathalelo lwempilo IHodges Qhagamshela IiHodges ngqo IHodges Heroes Studisciplinary Studies Iinyani nje Izifundo zoMthetho YokuFunda konke ulawulo Marketing Master Unesi Isikhokelo esikwi-Intanethi UmNcedisi weZonyango Imfundo noQeqesho Psychology Technology UkuGcina iKhredithi ngobuhlobo Izatifikethi zesidanga sokuqala
Ikopi yococeko lwamazinyo
Kuza ngokukhawuleza! Inkqubo yeHodges Dental Hygiene Programme iya kubonelela ngemfundo efunekayo ukuze ukhule kwicandelo lemfuno ephezulu yoCoceko lwamazinyo! Ngokwe-Career Onestop, ukuNcediswa kwaMazinyo kulindeleke ukuba kukhule ngama-23% ngo-2026 eFlorida. Yiba phakathi kwabokuqala. Ukuba ujonge umsebenzi oza kukhula kunye nawe,…
Indlela eya kubuninimzi
Umtsha ekuthengeni ikhaya? Lo masifundisane unayo yonke into oyifunayo ukuze wenze ukhetho oluhle xa usenza enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ebomini bakho. Siza kukuhamba ngenyathelo nenyathelo ngamalungu onke enkqubo yokuthenga amakhaya kwaye sikwazise malunga nemibuzo ebalulekileyo ekufuneka…
Inkxaso ngqo yoBuchule
Inkxaso yeNkxaso yaBantu abaDalekileyo (DSP) Inkcazo: Ngale nkqubo yokufumana isiqinisekiso, uya kufumana uqeqesho lokubonelela ngeenkonzo zenkxaso ngokuthe ngqo kubantu abakhubazeke ngokwasengqondweni nophuhliso (njenge-Autism, i-Down Syndrome nokunye okuninzi). Uya kufumana izatifikethi zoqeqesho oluqinisekileyo kunye nokuhlala kunye nengcali eqinisekisiweyo. Uza ku…
Wamkelekile kwi-HU ngokuthe ngqo, kwiCandelo le-Express leHodges University iYunivesithi yaseHodges ibonelela ngezatifikethi ezijolise kubasebenzi kunye needigri ezifunekayo kwingingqi nangaphaya. Iindawo zibandakanya ukhathalelo lwempilo, itekhnoloji, ishishini, ulawulo, kunye nezemali. Abafundi banokuthatha iiklasi ekhampasini, kwi-intanethi, nangokwezifundo zethu zeTekhnoloji eziPhuculweyo (TEC), evumela…
Iziseko zeLifu le-AWS
IiNkonzo zeWebhu zeAmazon (i-AWS) iZiseko zeLifu leMfundo linyathelo lakho lokuqala kwilizwe elifunwayo lekhompyuter yelifu le-AWS.
Iziseko zokuNceda amazinyo
Faka isicelo namhlanje! Iziseko zokuNxibelelanisa iiHodges zeNkqubo yokuNcedisa amazinyo ziya kubonelela ngesiseko esifunekayo ukuze uqalise kwicandelo elinemfuno ephezulu yokuNcedisa amazinyo! Ngokwe-Career Onestop, ukuNcediswa kwaMazinyo kulindeleke ukuba kukhule ngama-23% ngo-2026 eFlorida. Isishwankathelo senkqubo Le nkqubo yenzelwe ukwazisa into entsha…
Yiba ngumqhubi wenqwelomoya kunye ne-BS yethu kwizifundo eziDibeneyo zoPhapho
Iinkqubo zeSatifikethi seBanga lesiDanga
Qalisa kwisiQinisekiso sakho seBakala lesiQinisekiso kwiiHodeji zeDyunivesithi yaseHodges zeDyunivesithi yaseHodges ziyilelwe ukuba zikunikeze ngezifundo ezizodwa zeshishini ezifunekayo ukwakha izakhono zakho ngelixa ugqithisa iikhredithi ezingundoqo eziyimfuneko kumhlobo okanye isidanga sebhatshela. Ukongeza, izatifikethi zethu zisiwe nge-100% kwi-intanethi kwaye zikuvumela…
IZiko lokuFunda uBomi bonke
IHodges Qhagamshela. Imfundo yobungcali kunye noQeqesho boBomi boBomi ngeZakhono zoBomi beHlabathi.
Ukufumana ukulungela kuqeqesho lolawulo kunye nezakhono zobunkokeli ezinokuthi zisetyenziswe kwisuphavayiza yokuqala yokusebenza ephezulu. Yiba lunxibelelwano oluphambili phakathi kokulawula abantu kunye nokusebenza kwemihla ngemihla kwemibutho. Izakhono zakho zokongamela zinokukunceda uqhube intsebenzo yabasebenzi, ekhokelela kwinkonzo yabathengi ekhethekileyo. Umgca Wokuqala…
Iinkqubo zesidanga sezeMpilo
Ukufumana izakhono kunye noqeqesho lokugxila kukhathalelo lwezigulana kunye nophando kwiiSayensi zezeMpilo.
Khetha i-Hodges BSN yokuphuhlisa izakhono zobongikazi ozifunayo ukuze uphumelele ukuqala ngosuku lokuqala
Isishwankathelo seNkqubo yeSatifikethi
Funda iinyani malunga neziQinisekiso zethu kunye noQinisekiso
Izatifikethi zemfundo eneemfuno ezizodwa.
Nxibelelana neMigangatho yokuHlola
Akukho nyani lokugcwalisa malunga neNkqubo yethu yokuDibana.
Iinyani malunga nesiGaba esiQhelekileyo soQeqesho lwaBasebenzi.
Akukho filler, Iinkqubo zeeNqanaba zeDigital Master's ezivela kwiHodges U.